Advantista mahavita irery?
2010-07-16 @ 22:56 in Finoana
Tranga iray tsy dia ankalazaina loatra eto amin'ny serasera ny resaka fibodoana tany ataona andian'olona milaza tena ho vahoaka sady nahazo alalana avy amin'ny minisiteran'ny mponina araka ny voasoratra ao amin'ny gazety tia tanindrazana amin'ny tanin'ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fahafito eny Soamanandrariny. Raha vao olona ambony eo amin'ny milaza tena ho mpitondra anefa no ifandonana dia sarotsarotra ihany ny hivoahan'ny raharaha. Manana ny eritreriny mikasika izany ity fiangonana ity amin'izay ataony.
Tafiditra lalina amin'ny politika angamba aho, eny fa na dia resaka fiangonana aza ny resaka eto, fa politika mitsabaka na manitsakitsaka ny toerana misy ny fiangonana no misy eto, ka ny setriny dia ny tsy maintsy hijoroana hanohitra izany toetran-jiolahimboto izany ka tsy hanjakazakany amin'izay olona na fikambanana izay fantany fa tsy hanao herisetra aminy tsy akory. Nieritreritra aho fa mba mety ho manana anjara ihany koa satria fanoherana ny halatra sy fibodoana tany no misy eto saingy sahiran-kevitra ihany. Niantso firaisankina eo amin'ny fiangonana sady milaza ny hamory ny mpiara-mivavaka aminy rehetra eny Soamanandrariny "Gradin III" tokoa ry zareo ny alahady 18 jolay saingy raha ny fijeriko azy dia ireo ao anatin'ny anaram-piangonana ihany no tena antsoiny.
Samy manana ny mahazatra azy sy ny mandresy lahatra azy tokoa ny tsirairay ka tsy azoko atao loatra ny mamelively na manome tsiny amin'izany. Efa mahazatra rahateo fa tsy tian-dry zareo loatra ny mifangaroharo amin'ny fiangonana hafa, fandrao manko manimba ny fahamasinan'ny fivavahana izany, ka na dia amin'ireny vondrom-bavaka ataon'olo-tsotra ireny aza dia manana ny azy manokana ny advantista fa tsy tia miaraka loatra amin'ireo tsy iray fiangonana aminy. Zavamisy izany ka raha misy ny toe-javatra tahaka izao dia sarotra ho an-dry zareo raha izao ry zareo vao hiantso fiarahana na fiaraisan-kina miaraka amin'ny hafa.
Izaho fotsiny no mieritreritra hoe, hay ve tsy fiangonana iray, intsony no iharan'ny antsojay tahaka izao fa itony koa ny hafa fa tràny ihany koa. Moa ve tsy fotoana izao iarahan'ny rehetra miara-mieritreritra sy mandanjalanja ny tokony hatao? Hatramin'izay manko ny FJKM irery ihany no tena heno ho lasibatra ka toa tsy nahataitra ny hafa loatra. Ankehitriny, misy koa ity fibodoana mahazo ny Advantista ity... moa ve tsy ahiana hiitatra amin'ny fiangonana hafa izao fanosihosena izao? Miantso ihany aho noho izany sao dia tsy fotoanan'ny fiolonolonana intsony izao fa tena avondrona tokoa ny hery ho enti-manohitra ny tsy rariny ka ny eto izao dia eo amin'ny fivavahana? Mbola hifanavakavaka ve ny samy fiangonana samy milaza tena ho kristiana?
Atsaharo ny ompa!
Tena tsorina fa efa elaela ihany no tsy namonjy ny fivoriana eny amin'ny tokotanin'ny Magro ny tena (mbola tsy tao amin'ny kianjan'ny finoana Behoririka mihitsy aho, izany dia noho ny asa atao mazava loatra). Miaiky ireo olona mazoto mankeny mandrakariva aho satria manana fikirizana izy ireo. Na izany aza dia mba maharaka ihany ny sombotsombin-java-misy ny tena noho itony aterineto itony afa-mihaino ny radio rindra (misy mpihaino tokoa ianareo ka aza manahy). Misy anefa ny manorisory ihany eo ampihainoana ny kabary mandeha eny fa lasa tsy mihaja loatra ny fitenenana.
Heno ihany manko fa misy ny fanivaivana tafahoatra ataon'ny sasany amin'ireo mandray fitenenana. Na inona na inona toetra sy haratsian'ny sasany, tsy mety kosa ny manompa azy ireny, indrindra fa toy ny manam-pahefana aminao, afa-misambotra anao noho ny teny tafahoatra ataonao izy fa tsy hoe noho ny tolona ataonao. Azo atao tsara ny mitsikera ny zavatra atao na hevitry ny sasany mifanandrina aminao fa ny manompa kosa tsy mety. Taloha toa mba nisy ihany ny famerana ny olona handray anjara fitenenana fa ankehitriny mitady hivadika ho gaboraraka ihany koa ny fifandaminana. Amiko manokana tsy olona masiaka no andrasan'ny maro na tadiavin'ny maro fa izay mahay mampivondrona ny maro sy mandresy lahatra olona betsaka indrindra ireo izay mihazohazon-kevitra amin'izao fotoana izao. Koa ahitsio, azafady indrindra, ny fomba fitenenana mba tsy ho menatra amin'ny tenin'ny mpikabary ny mpihaino azy.
Jentilisa 17 jolay 2010 amin'ny 00:57